लोकेन्द्र बोगटीको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई खुल्ला पत्र
लोकेन्द्र बोगटी, ५ पौष – मन्त्रि ज्यू नमस्कार
म लोकेन्द्र बोगटी दुधौली नगरपालिका १ सिन्धुली ।
स्वास्थ्य मानव जीवनकालमा सबैभन्दा संबेदनसिल पाटो हो । त्यसैले स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकतामा पर्दछ । अस्वस्थ मानिसले सफल कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन । जस्तोसुकै काम गर्न पनि सर्वप्रथम स्वास्थ्य प्रतिकुल हुन आवश्यक हुन्छ । प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्दछ।
माहामारीको रुपमा कोरोना भाइरसको कारण मानव जिवन अस्तव्यस्त भएको छ । यस माहामारिबाट हाम्रो नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । यस विषम परिस्थितिमा सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट क्षेमताले सकेको सहयोग गरिरहेकानै छन् । यतिबेला पुर्ण निर्मुल नभए पनि केहि नियन्त्रण भई केही सहज परिस्थिति बनेको छ । माननीय मन्त्री ज्यु, स्वस्थ मानिस र अस्वस्थ मानिसको अबस्थाको बारेमा मैले जानकारी गराईबस्नु नपर्ला ! नेपालमा हुँदा खाने र हुनेखानेको बिचमा गहिरो खाडल बनिसकेको छ । जस्ले सम्पन्न परिवारमा जन्म लिन्छ उसले अभावमा जिउन पर्दैन तर गरिबिमा जन्मनेले जन्मजातै रोगी भएर जन्मनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कम्युनिस्टको सरकार भएको देशमा सामान्य आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न नसक्नु लज्जास्पद हो। मन्त्री ज्यु तपाईंले कस्तो रणनीति बनाएर पदभार ग्रहण गर्नुभयो त्यो त मलाई थाहा छैन तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा तपाईंको रणनीति प्रती आशा राख्नेठाउ मैले देखिन।
गरिबीको कारण रोगहरु उपचार नगरी पालेर बस्नेहरु धेरै देखेको छु मैले । सहनै नसक्ने भैसकेको अबस्थामा भएको सम्पत्ति बेचेर उपचार लगाएको पनि देखेको छु । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएपनी चिकित्सकको अभाव छ। जहाँ चिकित्सक छन् त्यहाँ आवश्यक उपकरणको अभाव छ । यो समस्या कहिले सम्म झेल्नुपर्ने हो?
अरुलाई पर्दा सामान्य र आफुलाई पर्दा सर्बेसत्ता भन्ने चिजबाट कोहिपनी अछुतो रहन सकेनन् । मात्र हिजो रातीको कुरा हो जिल्ला अस्पताल सिन्धुलिले यहाँ आवश्यक उपकरण छैन तपाईंको बिरामी काठमाडौ लानु भनेर पठाईदियो। एम्बुलेन्समा अक्सिजन दिएर लगेको एमरर्जेन्सि बिरामी आइसुयुमा राख्नुत कता हो कता त्री बि शिक्षण अस्पताल माहाराजगंज काठमाडौंले भर्ना लिन मानेन। नेपाल मेडिकल कलेज र काठमाडौं मेडिकल कलेजले पनि भर्ना लिन नमाने पछी त्री बि शिक्षण अस्पतालमा कारण बुज्दा बेड नभएको पाइयो। कोरोना नेगेटिभ देखाउदै उपचार नगरी नहुने भएकोले जबर्जस्ती बिना बेडनै एमर्जेन्सिमा भर्ना गराइयो र रातभरि बिरमिलाई कुर्सीमा राखेर उपचार गराइयो। के यो तपाइलाई समस्या हो जस्तो लाग्दैन? के उपचार पनि पहुँच भएकोले मात्र पाउने हुन् ? किन अस्पताल प्रसासन गैर्हजेम्मेवार बन्दैछ? उपचार गर्न आएको बिरामिलाई राख्ने ठाउँ छैन भनेर फिर्ता लैजा भन्नू उचित हो र? ईमर्जेन्सी बिरामिलाई डाक्टरले टिकट नकाटी उपचार हुदैन भनेर पठाउछ अनि टिकट काट्न लामो समय सम्म लाइनमा बस्नुपर्छ के यो न्यायजनक हो र?
कहिले सम्म बिरामिले भोग्नुपर्ने हो सास्ती ? कहिले सम्म गरिबीको कारण उपचार नपाएर मर्नु पर्ने हो बिरामी? पैसा तिरेरनै उपचार गर्छु भन्दा किन भर्ना लिदैनन अस्पताल ? के तपाईं यो सबै समस्या कोरोना भाइरसमा लगेर जोड्नुहुन्छ? कहिले देखि डाक्टरले आफ्नो पेशा लाई आम्दानीको श्रोत भन्दा माथि उठेर सेवा सम्झिने बाताबरणको निर्माण हुन्छ ? के तपाईं संग राम्रो रणनीति छ ? कि राजीनामा दिने सोचाइमा हुनुहुन्छ ? जवाफको पर्खाइमा छु ।
लोकेन्द्र बोगटी दुधौली नगरपालिका १ गैरिमा बस्नु हुन्छ ।